दोस्रो पाठ्यक्रम | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: दोस्रो पाठ्यक्रमहरू
लसुन र अदरक संग caramelized पोर्क रिब्स
स्वादिष्ट पोर्क पसलहरू पकाउँदा धैर्यता लिन्छ। अब मासु पकाउने छ, यो स्वाददार हुनेछ। थप रूपमा, हड्डीको मासु सुँगुर र रसिलो छ। पोर्क पसलियाँ उत्कृष्ट हुन् ...
यूक्रेनी व्यञ्जन: मासु benderiki - नुस्खा
प्रकाशित 17.11.2018 17.11.2018
बेन्डेर्की विशेष गरी अक्सर युक्रेनको पश्चिमी क्षेत्रमा तयार गरिन्छ। वास्तवमा, यी मासु भर्ने क्रेपहरू हुन्। तर परम्परागत छैन - रोल, तर त्रिकोणमा मोडियो। ताकि bendiks को लागि भरिने रसदार र ...
क्रिसमस टर्की बेकन, लिभर र साउसेजसँग भरिएको - एक सुपर नुस्खा!
यदि तपाईं यसमा त्यस्तो टर्की राख्नुहुन्छ भने तपाईंको नयाँ वर्षको टेबल वास्तविक परी कथा जस्तो देखिनेछ। ठूलो, रसिलो, पौष्टिक र धेरै, धेरै स्वादिष्ट! --7 सर्विंगका लागि तपाईलाई आवाश्यक हुन्छ: १ ठूलो टर्की ...
पनीर बलहरूसँग चिकन
तपाइँ पनीर संग स्वादिष्ट चिकन मन पर्छ? कुन डिशको स्वाद पूरक हुन्छ, यसलाई अझ विशेष बनाउँछ? त्यसोभए पनीर बलहरूको साथ कुखुराको लागि हाम्रो विधि तपाईंलाई उपयुक्त हुनेछ! सामान्य साइड डिशको साथ फ्राइड कुखुराको साथ घर परिवारलाई खुवाउनुहोस् ...
पोर्चुगल भोजन: चावलका लागि पकाउनुहोस् र सेतो बीन र भाषागत सोजज
पोर्तुगाली खाना पकाउन सिमी व्यंजनहरु बिना कल्पना गर्न सकिदैन। त्यहाँ बीन सूप, सलाद, जटिल साइड डिशको लागि एक हजार र एक व्यञ्जनहरू छन्। विभिन्न प्रकारका सिमीहरू माछा र मासुसँग मिल्दछन्। यो स्यान्डविच स्प्रेड, म्यास गरिएको आलु र मिठो मिठाईको लागि भर्ने बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ। पूर्ण रेसिपी, पोर्चुगाली खाना बनाउनुहोस् - सेतो सिमी र सॉसेज। डिश एक स्ट्यान्ड-एक्लो वा जटिल साइड डिशको रूपमा हेर्न सकिन्छ। उसको लागि, तिनीहरूले प्याज, पेपरिका र काली मिर्चको साथ मसलादार अर्ध-धुम्रपान पोर्क सॉसेज छनौट गर्दछन्। पोर्चुगलमा, यस प्रकारको सॉसेजलाई लिंगुआनिया भनिन्छ। यसको सट्टामा, तपाईं कुनै अन्य वा धूम्रपान मासु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पोर्चुगली बीन रेसिपीहरूको लागि सामग्री: उमालेको सेतो गेडाहरूको जार; २०० ग्राम सॉसेज; १ प्रत्येक गाजर, लसुन र प्याज; ताजा अजमोद को एक गुच्छा; २०० ग्राम चामल। खाना पकाउने सिमीहरू यदि तपाइँ नुस्खाको लागि सुख्खा बीन्स प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तयारीले पूरा दिन लिन्छ। तपाईंले यसलाई कम्तिमा १२ घण्टा भिजाउनुपर्नेछ, त्यसपछि लामो समयसम्म पकाउनुहोस्। तर तपाईं डिब्बाबंद खाना प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ - उमालेको गेडाहरूको एक जारले धेरै समय बचत गर्नेछ। मुख्य कुरा यो हो कि बरियामा सिमी गेडाहरूमा हुन्छ, र दलियामा ओभरकोक हुँदैन। डिश एक कचौरामा शुरूबाट अन्त्यसम्म पकाइन्छ। प्याज र गाजरलाई ससेजको स्लाइसमा फ्राई गर्नुहोस् (मेडिटेरियन खानामा, जैतुनको तेल फ्राइंगको लागि प्रयोग गरिन्छ)। भात थप्नुहोस्। तपाईं उमालेको पानी वा उम्लिएको शोरब डाल्न सक्नुहुन्छ। हिलाउनुहोस्, स्वाद र बीन्स थप्नुहोस्। चामल कहिले तयार हुन्छ भनेर निर्धारण गर्न तयारी। सेवा गर्नु अघि कटा पार्सलीको साथ छर्कनुहोस्। उही ...
कसरी आलुलाई सुस्त कुकरमा तान्नु हुन्छ?
कसरी ढिलो कुकरमा आलु फ्राई गर्ने? मल्टुकुकरमा आलु फ्राई गर्न तपाईंले बेकि or वा फ्राई program प्रोग्राम प्रयोग गर्नुपर्दछ। आलुका लागि पकाउने समय मोडेलको शक्ति र काटिएको आलुको आकारमा निर्भर गर्दछ।
कसरी पोड्रेचेभ पोर्क वा फ्ल्यान्कको पेटको भाग अचार गर्ने यसलाई मासुको तहसहित बोसो भनिन्छ।
सुँगुरको सुँगुरको पेटलाई कसरी नुन दिने वा फ्याँकिएको मासुको लेर्डसहित यसलाई भनिन्छ मासुको सुकाको पेट उमाल्ने सल्लाह दिन्छु। लर्डरको भित्री भागमा t चम्मच नुन डालो। १ किलोग्राम र रातोको लागि चम्मच ...
कसरी अल्जाइज स्याहार गर्ने खाना?
कसरी aldente तरकारी पकाउन? पूर्ण रूपमा पकाए सम्म नपकाउनुहोस्, र त्यसपछि यसलाई चिसो पानीमा राख्नुहोस्, मलाई बरफको पानीको बारेमा थाहा छैन। म निम्नको रूपमा पकाउँछु - मैले zucchini वा zucchini ठूलो काट्छु ...
दूधको साथ चावल वा बागवानी पकाउने खाना कसरी बनाउने? त्यहाँ कुनै भित्री व्यञ्जनहरू अभ्यासमा कोसिस गरियो?
दूधमा चावल वा बाजरा दलिया कसरी पकाउने? के त्यहाँ कुनै विवेकपूर्ण व्यंजनहरू छन् जुन अभ्यासमा प्रयास गरीएको छ? जब म चश्मासँग नाप्छु र चम्मचसँग राम्रोसँग काम गर्दैन, म हेर्छु र स्वाद गर्छु र सबै ...
के म आलुले पकाएको मशरूम वा पिकलेटको साथ आउन सक्छु?
के नुनिलो वा अचारको च्याउको साथ आलु फ्राई गर्न सम्भव छ? तपाईं एउटा आलु फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ, र यसलाई नमकीन र अचारको मशरूमको साथ खान सक्नुहुन्छ (तपाईं तिनीहरूलाई फ्राउन आवश्यक छैन)।
कसरी जौ कुकुर हुन वेल्ड गर्न को लागी?
जौ कसरी पकाउने कि यो crumbly छ? दानालाई सास प्यानमा राख्नुहोस् र पानीको कोमल धारामा राख्नुहोस्, लगभग सबै ड्रेगहरू नधोएसम्म हलचल गर्नुहोस् (यो पिठो हो जुन अनाजको ढुवानीको क्रममा बनिएको थियो ...
चिकन पेट पकाउने समय के हो?
कुखुरा पेट पकाउन कति समय लाग्छ? अझै, एक धेरै राम्रो नुस्खा) प्याजहरूलाई घण्टीमा काट्नुहोस्, फ्राई, ग्रेटेड गाजर थप्नुहोस्, थोरै थप फ्राई गर्नुहोस्। त्यसोभए, बल्गेरियाको काली मिर्च काट्नुहोस् तरकारीहरूमा स्ट्रिपहरूमा काट्नुहोस्, र फेरि ...
तपाईं भान्सा मिर्चको लागि धुवाँ बनाउनुहुन्छ?
कसरी तपाईं भरिएका मिर्च ग्रेवी बनाउने? मेरो गाजर भरिने (प्याज, sauted गाजर, एक सानो पकाएको चामल, कीन्सर गरिएको मासु तलिंदै छ - केवल रंग परिवर्तन र बन्न को अंश हो ...
कसरी मासु खुट्टा सींगहरू पकाउने
कसरी कीरा मासुको सिs पकाउने सि the्ग उमालेर, प्याज र टमाटर पेस्टको साथ कीराइएको मासु त्राउन, तपाईं परिणाम मासु सीsको साथ मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईंले मासुलाई अर्को छेउमा राख्न सक्नुहुन्छ ...
सिपी कीराले कसरी उपयोगी छ? सबै समुद्री खाना जस्तै, तिनीहरू पनि प्रोटीन र माइक्रोइलिमेन्टहरूमा धनी छन्। सबै Mussel bivalve मोलस्कहरू हुन्। सिपी कीराले मासु मानव शरीर को लागी उपयोगी ग्लाइकोजेन को सामग्री को मामला मा सबै भन्दा माथि छ ...
पायलफ कसरी बनाउने? चावल कुरै भएन।
कसरी pilaf सही पकाउन? यसैले चामल बिग्रिएको छ। कम पानी चाहिन्छ, र पकाउँदा, ढक्कन नखोल्नुहोस् र झोलामा हस्तक्षेप नगर्नुहोस्। मसँग आधा घण्टा धूपमा छ ...
चावल कसरी बनाउने? त्यसोभए उहाँले पहेंलो रंगको प्रबर्धन गर्नुहुन्छ? टर्मेरको साथ सुने वा के को थप्न आवश्यक छ?
भात कसरी पकाउने? त्यसोभए ऊ पहेलो रंग हुन सक्छ? हल्दी संग सुनें वा म के थप गर्ने? केवल भगवाले दुवै र color र गन्ध दिन सक्छ। हल्दीले रंग दिन्छ, तर स्वाद होइन। ...
मार्बल बेफ के हो?!
मार्बल गोमांस के हो?! यहाँ राम्रो संगमरमर रहेको छ: http://www.kamentorg.ru/ म तपाईंलाई सल्लाह दिन्छु कि त्यहाँ आफैंलाई केहि खोज्नहोस् ... चराहरूको पातलो शिराका साथ गोमांस। यो फ्याटको लेयरहरूसहितको मासु हो जुन सिर्जना गर्दछ ...
कसरी हृदय, जिगर र फेफुसा पकाउने? सुँगुर
कसरी मुटु, कलेजो र फोक्सोलाई स्वादिष्ट पकाउने? सुंगुरको मासु तपाईंले BOVE EGGS खाने कोशिस गर्नुभयो? उनीहरू भन्छन् कि यो स्वादिष्ट छ)) इमान्दारीपूर्वक, मलाई त्यस्ता चीजहरू कसरी पकाउने भनेर थाहा छैन।)) यो सत्य हुनु राम्रो हो, एक टेंडरलिन ...
49 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,645 प्रश्नहरू।